श्रावण ४, २०७६ ०३:०४:३८
अनियमितता गरेको आरोपमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा माघ २२, २०७५
महेन्द्र राजमार्ग नै व्यक्तिको नाममा पास ! माघ २२, २०७५
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको नयाँ डिपिआर तयार माघ २२, २०७५
विज्ञापनमा त्रुटि भए पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख सम्मको जरिवाना सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा भएका कसुरमा पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ । माघ २२, २०७५
'स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४' संशोधन गर्ने तयारी करिब दुई वर्षको अभ्यासलाई समीक्षा गर्दै सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ । स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन भन्दै जनप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाउँदै ऐन संशोधन गर्न लागिएको बुझिएको छ । माघ २१, २०७५
अर्को वर्ष वृद्धभत्ता बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षमा वृद्धभत्ता बढ्ने बताएका छन् । सहिद हेमनारायण यादवको १५औँ स्मृतिसभालाई सिरहामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वृद्धवृद्धाको हितका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ । माघ २०, २०७५
एनजिओ/आइएनजिओ लाई गृह मन्त्रालयबाट अलग गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ/आइएनजिओ)लाई गृह मन्त्रालयबाट अलग गर्ने तयारी गरिएको छ । गैरसरकारी संस्थालाई गृहबाट अलग्याएर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमातहत राख्ने नीतिगत पहल सुरु भएको खबर नया पत्रिका दैनिकले छ्पेको छ । गृहमातहत नै रहिरहँदा सबै गतिविधिमा निगरानी बढ्ने संकेत देखिएपछि गैरसरकारी संस्थालाई गृहबाट अलग गरी महिला बालबालिका मन्त्रालयमातहत लैजान खोजिएको हो । माघ १९, २०७५
सशस्त्र प्रहरीका एसएसपीसहित चार जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर विशेष अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलका एसएसपीसहित चार जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । विशेषले बलको बाँकेस्थित कार्यालयमा काँडेतार खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी एसएसपी गोपाल मिश्र, इन्स्पेक्टर चित्रबहादुर केसी, हवल्दार नयनबहादुर ओली र ठेकेदार राजु रावललाई सजाय तोकेको हो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । माघ १८, २०७५
काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक ४ किलोमिटर छोटो हुने काठमाडौं–तराई–मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को दूरी चार किलोमिटर घट्ने भएको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा लिएको सेनाले फास्ट ट्रयाकको लम्बाइ ७२.४ किलोमिटर कायम गर्ने जनाएको हो । ‘हाल ७६.४ किलोमिटर रहेको फास्ट ट्रयाकको दूरी चार किलोमिटर घटाइनेछ,’ । माघ १६, २०७५
वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण : अख्तियारले छानबिन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विस्तृत छानबिन सुरु गरेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न खडा भएपछि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापिएको छ । माघ ११, २०७५
कांग्रेसको निष्कर्ष : सरकार र सभामुख गैरजिम्मेवार नेपाली कांग्रेसले सरकार र सभामुख गैर जिम्मेवार ढंगल प्रस्तुत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पछिल्लो समय सरकारले जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वसप्रश्वास केन्द्र र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई विघटनको संघारमा पु¥याएको, डा. गोविन्द केसीको मागलाई वेवास्था गरेको, निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या मा संलग्न अपराधिलाई कार्वाहि नगरेको तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको उपस्थिति विनानै संवैधानिक पपिरषद्को बैठक राखि नियुक्तिका निर्णयहरु गरेको प्रति काग्रेसले तीव्र असनतुष्टि जनाएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ । माघ ११, २०७५
सरकार भन्छ : चिकित्सा शिक्षा विधेयक जसरी पनि पास हुन्छ, गोविन्द केसीले हावामा तरबार चलाउन खोजे सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक जसरी भएपनि संसदबाट पारित हुने बताएका छन। बिहीबार सिंहदरवारमा मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले प्राध्यापक डा। गोविन्द केसीले हावामा तरबार चलाउन खोजेको आरोप समेत लगाए। माघ ११, २०७५
छोरी जन्मे प्रदेश सरकारले १ लाखको बिमा गरिदिने प्रदेश २ सरकारले छोरी जन्मे एक लाख रुपैयाँको बिमा गर्ने भएको छ। बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ कार्यक्रमअन्तर्गत ८ वटै जिल्लामा जन्मेका बालिका शिक्षा बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो। २० वर्ष उमेर पुगेपछि उनीहरुले उक्त रकम लिन सक्नेछन्। यसबाट उनीहरुलाई उच्च शिक्षा आर्जन गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्य राखिएको छ। माघ १०, २०७५
प्रदेश १ मा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझाव सङ्कलन प्रदेश नं १ मा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न झापाबाट सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिएको छ । प्रदेश नं १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न गठन गरेको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले बिहीबारदेखि झापाबाट अध्ययन शुरु गरेको हो । पुष १४, २०७५
मनाङमा हिमपात, तापक्रम माइनस २० मा झर्‍याे चिसो बढेसँगै मनाङमा हिमपात सुरु भएको छ । बिहीबार दिउँसो दुई बजेदेखि पर्न थालेकाे हिउँ लगातार १० घण्टासम्म परेको थियाे । जिल्लाको माथिल्लो भेग खांसार, भीमताङ, गुवाल, मनाङगाउँलगायत ठाउँमा परेको बाक्लो हिउँ अहिले भने रोकिएको छ । अन्य भूभागमा भने पातलो हिउँ परेको छ । पुष १३, २०७५
निर्मला पन्त हत्याकाण्ड : संघर्ष समितिको आन्दोलन स्थगित बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको न्यायिक आन्दोलनमा होमिएको नागरिक संघर्ष समितिले आन्दोलन स्थगित गरेको छ । पुष १३, २०७५